Umphakathi wakwaXaba ufuna incazelo | News24
LAST UPDATED: 2018-08-22, 07:22
Umphakathi wakwaXaba ufuna incazelo
Umphakathi wakwaXaba eGamalakhe esigcemeni u27 uthi ufuna incezelo ngokwakhiwa kwezindlu zemixhaso njengokusho kukangqongqoshe wezezindlu esifundazweni uRavi Pillay ngonyaka odlule. Ungqongqoshe wathembisa abahlali bakwa Xaba ukuthi bazokwakhela izindlu ezi-2000 ezizophela ngonyaka we-2017.
Emva kwemihlanagno eminingi ebanjwe umphakathi kuphume isinqumo sokuthi ukwakhiwa kwezindlu akumiswe kancane ngenxa yokudideka kwabahlali. Okhulumela amalungu omphakathi kuward27 uSelby Mzindle uthe kube nokungatholani okwenzekile kulomphakathi mayelana nokwakhiwa kwalezindlu.
“Khona ukudideka okubekhona ngesikhathi inkamapni eyenza iconsulting ithi emhlanganweni kuzokwakhiwa izindlu ezingama-500 endaweni yakwa Xaba. Lokhu akusikona esakuthenjiswa uPillay. UMec wasitshela ukuthi izindlu zizoba yizi-2000, ingakho sithe akungaqalwa ukwakhiwa. UMzindle uthe njengomphakathi bathathe isinqumo sokuthi akubuye uPillay azobachazela kabanzi ngalokhu abakuzwayo. Okhulumela umasipala iHibiscus uNomusa Zulu uthe bayitholile incwadi evela emphakathi wakwaXaba.
“Incwadi siyitholile kodwa sisazama ukuba siyidlulisele kungqongqoshe uRavi Pillay.
Abahlali bazoyithola incazelo abayidingayo,” kusho uZulu.
Okhulumela umnyango kaRavi Pillay akatholakalanga ukuba aphawule ngaphambi kokuthi kushicilelwe iphepha.